လာလီဂါပွဲစဉ်(၁၂)မှာ အသင်းကြီးတွေ ရလဒ်ကောင်းရယူနိုင်မလား
11 Nov 2018 . 11:02 AM
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ လာလီဂါပွဲစဉ်(၁၂)မှာ အသင်းကြီးတွေ ရလဒ်ကောင်းရယူနိုင်မလား ဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဘက်တစ်အသင်းနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်သလို ရီးယဲလ်အသင်းကတော့ အဝေးကွင်းမှာ ဆယ်လ်တာဗီဂိုအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ – ဘက်တစ် ( တနင်္ဂနွေ ည ၉း၄၅ နာရီ )
ဒီပွဲကို ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ကော်တင်ဟို Coutinho လွဲချော်မှာဖြစ်ပေမယ့် အသင်းခေါင်းဆောင် တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi ကတော့ပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိဒီနှစ်သင်းရဲ့ အခြေအနေအရ ဘက်တစ်အနေနဲ့ ဘာစီလိုနာကို ယှဉ်ကစားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘဲ ဂိုးများများမပေးရအောင်သာ အဓိကထားကစားရမှာပါ။ လာလီဂါနောက်ဆုံး(၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးထားတဲ့ ဘက်တစ် ရလဒ်ထပ်ဆိုးဦးမယ့် ပွဲပါပဲ။ နူးကမ့်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဂိုးတွေကို ရေတွက်ရမှာဖြစ်ပြီး ဘာစီလိုနာ အနိမ့်ဆုံး(၂)ဂိုးပြတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဆယ်လ်တာဗီဂို – ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် ( တနင်္လာမနက် ၂း၁၅ နာရီ )
ရီးယဲလ်ယာယီနည်းပြ ဆိုလာရီ Solari ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတာ ထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ့် ပွဲပါပဲ။ ဆယ်လ်တာဗီဂိုအသင်းက မာကျောမှုရှိတဲ့ အသင်းဆိုပေမယ့် နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းဟာလည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်သင့်နိုင်ထိုက်တဲ့ ပွဲတွေကို အနိုင်ကစားထားပေမယ့် ခြေစွမ်းကတော့ ထင်သလောက် အားရစရာမရှိသေးပါဘူး။ ဆယ်လ်တာဗီဂိုကွင်းမှာတော့ ရီးယဲလ်အနိုင်ရဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပြီး ဂိုးများများနဲ့ သရေကျသွားနိုင်ပါတယ်။
Photo: AS English – Diario AS , Chicago Tribune , TSJ101 Sports!
လာလီဂါပှဲစဉျ(၁၂)မှာ အသငျးကွီးတှေ ရလဒျကောငျးရယူနိုငျမလား
ဒီတဈပတျရဲ့ လာလီဂါပှဲစဉျ(၁၂)မှာ အသငျးကွီးတှေ ရလဒျကောငျးရယူနိုငျမလား ဆိုတာစိတျဝငျစားစရာပါ။ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ဘကျတဈအသငျးနဲ့ အိမျကှငျးမှာ ယှဉျပွိုငျကစားရမှာဖွဈသလို ရီးယဲလျအသငျးကတော့ အဝေးကှငျးမှာ ဆယျလျတာဗီဂိုအသငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာ – ဘကျတဈ ( တနင်ျဂနှေ ည ၉း၄၅ နာရီ )
ဒီပှဲကို ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ကျောတငျဟို Coutinho လှဲခြျောမှာဖွဈပမေယျ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ တိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi ကတော့ပွနျလညျပါဝငျလာနိုငျပါတယျ။ လကျရှိဒီနှဈသငျးရဲ့ အခွအေနအေရ ဘကျတဈအနနေဲ့ ဘာစီလိုနာကို ယှဉျကစားဖို့ဆိုတာမဖွဈနိုငျဘဲ ဂိုးမြားမြားမပေးရအောငျသာ အဓိကထားကစားရမှာပါ။ လာလီဂါနောကျဆုံး(၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးထားတဲ့ ဘကျတဈ ရလဒျထပျဆိုးဦးမယျ့ ပှဲပါပဲ။ နူးကမျ့မှာ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ဂိုးတှကေို ရတှေကျရမှာဖွဈပွီး ဘာစီလိုနာ အနိမျ့ဆုံး(၂)ဂိုးပွတျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဆယျလျတာဗီဂို – ရီးယဲလျမကျဒရဈ ( တနင်ျလာမနကျ ၂း၁၅ နာရီ )
ရီးယဲလျယာယီနညျးပွ ဆိုလာရီ Solari ဘာလုပျပွမလဲဆိုတာ ထပျပွီးစောငျ့ကွညျ့ရမယျ့ ပှဲပါပဲ။ ဆယျလျတာဗီဂိုအသငျးက မာကြောမှုရှိတဲ့ အသငျးဆိုပမေယျ့ နောကျပိုငျးပှဲတှမှော ခံစဈပိုငျးအားနညျးမှုတှရှေိနပေါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးဟာလညျး အခုနောကျပိုငျးမှာ နိုငျသငျ့နိုငျထိုကျတဲ့ ပှဲတှကေို အနိုငျကစားထားပမေယျ့ ခွစှေမျးကတော့ ထငျသလောကျ အားရစရာမရှိသေးပါဘူး။ ဆယျလျတာဗီဂိုကှငျးမှာတော့ ရီးယဲလျအနိုငျရဖို့ ခကျခဲနိုငျပွီး ဂိုးမြားမြားနဲ့ သရကေသြှားနိုငျပါတယျ။